5 xaqiiqo oo kusaabsan kululaynta aduunka | Saadaasha Shabakadda
Nasiib darro Maanta ma jiro wacyi gelin weyn oo caan ah oo ku saabsan wax kasta oo ku xeeran isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka. Dad badan ayaa diidan inay ka fekeraan saameynta halista ah ee isbeddelka cimilada ku keenayo meeraha oo dhan.
Markaas ayaan kuu sheegayaa 5 run ah oo ku saabsan kuleylka adduunka si aad u ogaatid sida ay u daran tahay iyo sida ay muhiimka u tahay in xal loo raadiyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Laga soo bilaabo 1880 heerkulka meeraha ayaa kor ugu kacay ugu yaraan hal darajo. Waa wax soo jiidasho leh in waqti aad u gaaban, heerkulku aad u kordhay. Waxa ugu xun ayaa ah in saadaashu haba yaraatee aysan rajo lahayn oo ay ka hadasho in kororku intaas ka sii weynaan karo.
Heerka badda ayaa sare u kacay sanadihii la soo dhaafay sababo la xiriira dhalaalida labada cir iyo glaciers. Kordhintaani waxay ka kooban tahay 8 sentimitir 20-kii sano ee la soo dhaafay waxayna khubaradu saadaalinayaan in dhamaadka qarniga, heerka laftiisa uu kor ugu kici doono hal mitir.
Waqtigu waa sii xumaanayaa waa in jiilaalku uu qabow yahay xagaaguna ay sii kululaanayaan. Xaqiiqadani way sii kordheysaa sanado badan.
Cimilada sii kululaaneysa ayaa sababaya noocyo sii dabar go’aya. Xogta runtii waa mid naxdin leh oo Waxaa la saadaalinayaa in bartamaha qarniga ilaa hal milyan oo xayawaan ah laga waayi doono wajiga Dunida.
50-kii sano ee la soo dhaafay, cufka barafka woqooyi ee Pole ayaa ka koray dhul baaxadiisu tahay 15 milyan oo kilomitir oo laba jibbaar ah, wuxuuna gaadhay 13 milyan oo kiilomitir oo laba jibbaaran. Waxay yihiin ku dhowaad 2 milyan oo kilomitir oo baraf ah oo lumay.
Waxaan rajeynayaa in 5taan runta ah ee ku saabsan diirimaadka adduunka ay kaa caawin doonaan inaad ka warqabto sida ay muhiimka u tahay in la daryeelo meeraha sida ugu macquulsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » 5 run oo ku saabsan kuleylka adduunka